Olee otu esi atụ ala ọma jijiji? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ala ọma jijiji ahụ mere n'etiti etiti mpaghara Iberian Peninsula taa nwere ike ime anyị obi abụọ ihe ọ bụ na kedu ka ihu igwe meteorology si eme na ọtụtụ oge abụwo protagonist nke akụkọ ahụ.
Gaa m na anya ala ọma jijiji ahụ iji mụtakwuo banyere ya.
Ala ọma jijiji bụ ihe ịtụnanya mere site na a na-ama jijiji nke ụwa n'ihi esemokwu nke efere tectonic na, ọ bụ ezie na a naghị ahụ ya anya, mejupụtara mbara ụwa anyị. Ebe obula onwere onu onu ahia iga enweta site na ugwu, rue ihe amara dika mmejọ, nke bu ihe n’eme mgbe efere abua di iche. Okwu a kacha mara amara dị na North America, ebe mmebi nke San Andrés dị.
Ebe ndị a debanyere ala ọma jijiji kachasị njọ, ọbụnadị iru inwe ike 7.2 na Richter n'ọtụtụ. Na-ekwu okwu banyere akpịrịkpa ...
Olee otu esi atụ ala ọma jijiji?
Ọ bụ ezie na ọkwa kachasị mara amara bụ nke Richter nke na-atụle ịdị ukwuu nke ihe ahụ, ndị ọkachamara na-ejikwa ya Mercalli n'ọtụtụ iji tụọ ihe si na ya pụta, na seismological n'ọtụtụ na oge iji chọpụta otú nkume ahụ siri sie ike na otú o si jee ije.
Na maapụ a ị pụrụ ịhụ ókè ala ọma jijiji ga-enwe ma ọ bụrụ na ha emetụ ala ndị Spen aka dị ka Richter n'ọtụtụ, nke ahụ bụ na-ekwu na:
Ihe ike nke 3 ma ọ bụ obere: a naghị echekarị ya, mana edere ya n'otu ụzọ ahụ. Ọ naghị ebutekarị mbibi a hụrụ anya.
Ihe ike site na 3 ruo 6: ọ na-egosi. O nwere ike ibute obere mmebi.
Ihe siri ike 6 ruo 7: Ha nwere ike imebi nnukwu obodo.
Ihe ike 7 ruo 8: Mmebi dị mkpa karịa. Ọ nwere ike ibibi mpaghara nke karịrị 150km.
Ala ọma jijiji karịrị ogo 8 nwere ike ibute nnukwu ihe ọghọm dị na mpaghara ọtụtụ kilomita. Mana enweghị ndekọ nke iru oke ahụ na mba anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ ala ọma jijiji na otu esi atụ ya?
Drones n'ọhịa nke ihu igwe